Ukuthumela - I-Next Supply Chain
I-NextsChain ibambisana nezinkampani zenethiwekhi ezingu-300+ ukuze zinikeze Ukuthumela Ngomhlaba Wonke.
Inqubo yethu Yokusabalalisa Ama-oda
Yiziphi izinzuzo ze-NextsChian Shipping?
1. Uzakwethu nabathwali bomhlaba abangu-300+, inkampani yethu iyakwazi ukuhlinzeka ngomkhumbi osheshayo nowongayo, ongasiza abathengisi bakwaShopify ukuthi banwebe ibhizinisi labo lokudonsa phansi emhlabeni wonke.Hhayi i-United States kuphela.
2. Ngokusekelwe ohlelweni lwethu oluqinile lokulandelela izinto, i-NextsChain ihlinzeka ngolwazi lokulandelela nsuku zonke ukuze kugcwaliswe iphasela ngalinye nge-NextChain.Kungasiza abathengisi bakwa-Shopify ukuthi baqaphe amaphasela abo futhi baphathe wonke ama-oda ngendlela efanele nangendlela efanele, uma kwenzeka bebhekana nephasela elingavamile ngesikhathi futhi behlise ukulahlekelwa.
3. I-NextsChain izolungisa isisekelo senkampani yenethiwekhi kusistimu yethu yezokuthutha ehlakaniphile phakathi nenkathi ephakeme njengoLwesihlanu Olumnyama noKhisimusi, ukuze kuqinisekiswe ukuthi amakhasimende angathola amaphasela awo kusenesikhathi.
4. Kungakhathaliseki ukuthi iyini lephasela leposi lezomnotho, i-Fast Express noma i-Ship by Sea, i-NextsChain ihlale iyisinqumo sakho esingcono kakhulu.
7 – 11 Izinsuku Zebhizinisi*
8 – 12 Izinsuku Zebhizinisi*
6 – 8 Izinsuku Zebhizinisi*
8 – 10 Izinsuku Zebhizinisi*
3 – 5 Izinsuku Zebhizinisi*
5 – 8 Izinsuku Zebhizinisi*
6 – 10 Izinsuku Zebhizinisi*
7 – 10 Izinsuku Zebhizinisi*
14 – 22 Izinsuku Zebhizinisi*
15 – 25 Izinsuku Zebhizinisi*
Isikhathi Sokuthutha esisohlwini asifaki isikhathi sokucubungula kufika ezinsukwini ezi-2 (ngaphandle kweMigqibelo, amaSonto, namaholide).
Isikhathi sokuthumela siyalinganiselwa futhi siqala kusukela ngedethi yokuthunyelwa, esikhundleni sedethi yoku-oda, futhi singathatha isikhathi eside kunosuku okulindelekile ngenxa yekheli elingavumelekile, izinqubo zokugunyazwa kwempahla noma ezinye izimbangela.
Ngenxa ye-COVID-19, isikhathi sokufika esilinganiselwe sizoba yizinsuku eziyi-15-45.